विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित झरना, किन बन्द हुँदैछ ? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित झरना, किन बन्द हुँदैछ ?
चीन, चैत २२ । दक्षिण पश्चिम चीनमा एक गगनचुम्बी महलमा बनाइएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित झरना बन्द हुने भएको छ । अत्यधिक खर्चका कारण झरना सञ्चालन गर्न अप्ठेरो भएसँगै बन्द गर्न लागिएको हो ।
यो झरनाले पर्यटकबाट हुने आम्दानीबाट यसको सञ्चालन खर्चसमेत उठाउन नसकेपछि यो सेतो हात्ती बन्दै गएको थियो । जसका कारण यो झरना अहिले चीनमा मजाकको विषय बन्ने गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस चीनले गर्याे प्रचण्डकाे उच्च प्रशंसा
सोँच विचार नगरिकन गरिने कामको उदाहरण दिनुपर्दा मानिसहरुले उक्त झरनाको नाम लिने गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस शुक्रकीट दान गर्ने युवालाई ‘आइफोन’ उपहार